Ngoxa uncedo olukhethekileyo, ungazifihla nayiphi na iphosakelo ebusweni bakho okanye ugxininise isidima sakho. Kwaye akukho nto ibaluleke kakhulu emehlweni. Nangona kunjalo, ubungakanani bamehlo bubaluleke kakhulu ekukhetheni ukwenziwa okulungileyo. Emva kwakho konke, akuyiyo yonke into eyenziwe ngayo ifanelekile kwamehlo amancinci. Ngokuqhelekileyo, amehlo amancinci ngenxa yobukhulu abujonga ngokusondelelana kunye nokufihla konke ukungaphumeleli kwaye abenze baveze ngakumbi, kuyacetyiswa ukuba basebenzise iingcebiso ezininzi.
Abanikazi beenki ezinqabileyo kufuneka bazi ukuba ukuba iilebhu zisondele kwintsipheko, ziyakunciphisa ngokubonakalayo, ngenxa yeso iso libonakala lincinci. Ngoko ke, umgca weelishi kufuneka uhambelane nomfanekiso wamehlo nobuso. Vumela ukuba neenki ezinzima zingumnikazi wamehlo amakhulu kuphela. Ewe, ukuba ubungakanani bamehlo abuvumeli ukuba uziqhayise, ngoko kufuneka ube nesineke kwaye uqhubeke ususa iinwele ezingaphezulu. Unokwenza ngokuqinisekileyo ngokwakho, kodwa kungcono ukudibana nomculi wokwenza. Umculi ozenzayo uya kukunceda ukhethe uhlobo olufanelekileyo lweelishi.
Izixhobo zokusasaza kunye nesicelo sabo
Iimboli zebumnyama kunye nezijikelezo phantsi kwamehlo zidala imiphumo yemimandla ebumnyama emehlweni, ngaloo ndlela ibukeka iyancipha. Ukukrazula iindawo ezimnyama, kunenjongo ngokwaneleyo ukusebenzisa i-agent ye-masking ebeka ngaphantsi kwamehlo, kuya kunceda ukucacisa amehlo, ukuphakamisa umbala.
Ukusetyenziswa kwezithunzi ezikhanyayo
Abanikazi bamehlo amancinci banconywa ukuba basebenzise imibala emide ye-shades - emhlophe, ipayipi, i-pink pin, i-ivory, i-beige-yellow, beige. Izithunzi kufuneka zisetyenziswe kwamehlo, ngaphezu koko, ngaphantsi kweshiya kunye nekiti yekona langaphakathi lelihlo, izithunzi ezininzi kufuneka zisetyenziswe, oku kuya kukhanyisa iliso. Unokusebenzisa iifumba zeeparlescent, kodwa ukuba kukho imibimbi kungcono ukhethe iifom-shadows, abazigxininisi iifolda ezingadingekile.
Iimvulo zemihlathi emnyama ngokulinganisela
Ngamehlo amancinci, ukwakheka kufuneka kuqale ukusuka kwikona elingaphandle kweso, ngelixa ezinye iintlobo zokwenza ziqala ukusuka kwiminyaka yobudala kwaye ziqhubele phezulu. Kwimeko yethu, inkophelo yeselula ayifanele ifuthe. Ngasentla kwiphondo lesiliso ngoncedo lwe-brush edibeneyo i-arc ibanjwe, i-eye cavity ngokwayo ayifanele ichukumiswe. I-arc ifihliwe ngaphandle. Ukulandela ijwabu lezantsi, kufaka izithunzi ezimnyama. Faka isicelo semithunzi akufanele ibe ngaphezu kwezinga lomfundi. Ukuqhubela phambili kwiphilodi ephakamileyo kwinqanaba lomfundi, kufakwe izithunzi ezimnyama. Ukubukeka kwandise iliso kwaye ngokukhawuleza ukukhawulela iso kwiempumlo, izithunzi ezimnyama zivame ukudibanisa ngakumbi ethempelini.
I-pencil ipencil okanye i-eyeliner
Abanikezeli bamahlo amancinci bangasebenzisa i-eyeliner, ipencilisi ye-contour, i-shadow shadow eye (egxininiswe kumgca wokukhula kwe-eyelash ngoncedo lwebhayisiki). Ukusebenzisa izithunzi ezikhunileyo, unokwenza umxholo ogqityiweyo kunokuba usebenzisa ipensela.
Ngokuncedwa ipensela, unako ukubonisa amehlo akho, kodwa ngenxa yoko kufuneka usebenzise umgca ngokufanelekileyo, ngaphandle koko uza kufumana umphumo ochaseneyo. Yingakho ufanele uqale umgca ukusuka kwikona yangaphandle kwiso ukuya ngasekuqaleni kwekhulu, ufikelele kwi-iris yeso, kufuneka uqedele umgca. Ukuba ipencilisi isetyenziselwa kwikona elingaphakathi kweso, oku kuya kuphuhlisa kuphela. Ngendlela, izithunzi ziyafakwa ngendlela efanayo nepensile. Ukuba isiphelo somgca sihlanjululwe ngepotton pad (ibrashi, umunwe, umfaki-sicelo), umgca awuyi kujonga ngokugqityiweyo. Into ephambili apha kukuba umgca kufuneka uncitshise kwaye uphumele ubuncinci. Kule meko, umgca kufuneka ube sondele ngokukhawuleza kwi-eyelashes. Dweba umgca kwiphilodi ephezulu, ngoku uqhube kwi-eyelidi ephantsi-draba umgca. Ngenxa yoko, kufuneka ufumane lo mfanekiso " " (njengokungathi i-Latin V).
Inyaniso yokuba i-mascara iyakwazi ukubonakala kwandisa amehlo yinto eyaziwayo. Kodwa ukufezekisa umphumo omhle, ngaphambi kokusebenzisa i-mascara isinconywa kusetyenziswa izixhobo zokukhwela i-eyelashes, oku kubonakala kwandisa amehlo. Ukuba i-eyelashes ibonisa phantsi, oku kuya kudala isithunzi phantsi kweliso. Yingakho i-eyelashes ephantsi, nayo, ifanele isetyenziswe i-mascara, eya kwenza ukuba kukhangeleke ngakumbi ukucacisa kwaye kwandiswe ngokubonakalayo kwandisa amehlo.
Iifake kunye nezithunzi ezimnyama
I-eyeliner ye-liquid, imithetho yesicelo
Amapensele ekwenzeni amehlo nemilomo
Ukujongwa kwamehlo - kugcizelela ubuhle kunye nokuzenzela
I-cheese kunye nokunqunywa kwenyama
Yiyiphi ibhinqa enokunyamezela abasebenzi
Inkokhelo "Intombazana yamanzi"
Indlela yokugcina iimpahla ezicocekileyo kwikhamera?
Umntla noMzantsi: I-Scandinavian Provence-ingaphakathi-2016
I-Persimmon: i-tart healer egcina impilo yakho
Isaladi "Ingcango phantsi kweengubo zoboya"
Umsebenzi wesikhashana phantsi kwesivumelwano
Yintoni ongayifaka kumfana ngoFebhuwari 14: izipho zangaphambili zintanda
Ingozi yezocwangciso zentsholongwane zanamhlanje
Samsa kunye nenkukhu
Indlela yokuphatha amaqanda ngeendlela eziqhelekileyo
Ukuba umfana ubonisa iimvakalelo zakhe ngokucacileyo